Iindlela zokuThengisa: Ukunyuka kweNxusa kunye neXesha loMdali | Martech Zone
I-2020 itshintshe ngokusisiseko indima yemidiya yoluntu edlala kubomi babathengi. Yaba ngumtya nethunga kubahlobo, usapho kunye noogxa, iqonga lobutshantliziyo bezopolitiko kunye nehabhu yeziganeko ezizenzekelayo nezicwangcisiweyo kunye nokudibana.
Olo tshintsho lubeke isiseko seendlela eziza kuphinda zilolonge intengiso yeendaba zentlalo kwihlabathi ngo-2021 nangaphaya, apho ukusebenzisa amandla oonozakuzaku begama kuya kuba nefuthe kwixesha elitsha lokuthengisa kwidijithali. Funda ukuze ufumane ulwazi malunga nendlela onokuthi ujonge ngayo kula maxabiso aphezulu, abalandeli, kunye nabalandeli ukwenza ubuchule bokwazisa kunye nefuthe ledigital brand yakho.
Umkhwa woku-1: Umxholo oQinisekileyo weBeats oQulunqwe yiStudiyo
Ngelixa imithombo yeendaba kwezentlalo iye yaba liziko lentengiso yohlobo, sisiqulatho sendalo esiphambili ekufikeleleni kubathengi, ngakumbi xa xa kuthelekiswa nentengiso.
EGreenfly, siyibonile indlela le ndlela yokuqinisekisa eyiyo eguqulela ngayo kumashishini ahlukeneyo kunye namaqonga. Iqela lomkhankaso we-Biden woMongameli lifumene kuvavanyo lwangaphakathi ukuba iintengiso zezopolitiko-eziveliswe ngobungcali, ezibonakala ngathi ziyimizuzwana engama-30-zazingasebenzi kakuhle kune-impromptu, imifanekiso engasemva kwabavoti besebenzisa ii-smartphones okanye ii-webcams zabo uthando lokuvota.
IKomiti yeSizwe yeDemokhrasi ikwaguqukele kwabo babaphetheyo ukuze bavakalise iindlela zabo malunga nezentlalo kunye nezedijithali malunga nezikhokelo zabo zokuvota ngo-2020, kubandakanya nowayesakuba nguMongameli wase-US kunye Umthandi wokuvota UBarack Obama ngenxa yayo Ndiya kuvota phulo.
IVoti yakho ayikaze ibaluleke ngaphezu kwento eyenzayo ngoku.
Namhlanje lusuku lokubhalisela ukuvota. Yiya e https://t.co/XdZz4dh82T ukubhalisa kunye nokwenza isicwangciso sokuvota. Kwaye uqiniseke ukuba wonke umntu omaziyo uyayenza, naye. pic.twitter.com/ItarX1d4zw
-Barack Obama (@BarackObama) Septemba 22, 2020
Umxholo oqinisekileyo usebenza ngokufanayo kwinqanaba labathengi. Umzekelo, iqela lentlalontle kwi-franchise yokomelela komzimba Ndiyayithanda iKickboxing ukwazile ukuvuselela kunye nokwahlula uphawu lwabo ukuphendula kutshintsho olukhawulezayo, iimeko zentengiso yasekhaya ze-COVID-19 ngokuqokelela uhlaziyo lomxholo orekhodwe ngaphezulu kwe-100 yabaphathi be studio zabo kulo lonke elaseMntla Melika. Kwaye I-SailGP ucofe ngempumelelo kwiimbaleki zeqela elihamba ngeenqanawa kwihlabathi liphela ukuba babelane ngomxholo ofakwe kwiikhamera zomzimba ngexesha lokhuphiswano.
Iposi ekwabelwana ngalo ngu-SailGP (@sailgp)
Umkhwa wesi-2: Abalandeli aBalandeli, bayinxalenye yeQela lakho loBuchule
Abathandi baba Abadali bemigangatho (igama abanye abalikhethayo abachaphazelayo) ngokwabo. Nangona abanye yenziwe ngumsebenzisi Umxholo usahleli ulungelelaniswe ziimpawu, akukho ndlela ibhetele yokukhuthaza imveliso kunokubiza amava okwenyani kubantu bokwenyani.
Embindini wobhubhane, kungekho ngqiqo yeetick-tape parade, i Los Angeles Dodgers Ubuntshatsheli be-MLB yeHlabathi yeHlabathi yabiza umbhiyozo obonakalayo. Iqela ledijithali leklabhu lihlanganyele ngaphezulu kwama-3,500 abalandeli ukuba bangenise ividiyo yabo yobuntshatsheli yokuphendula ngeGreenfly, abayidibanisa kwimontage yevidiyo.
Sibhiyozile. Salila. Siphumelele. #LAToonke pic.twitter.com/U3nLivNz7K
-Los Angeles Dodgers (@Dodgers) Novemba 12, 2020
Eli phulo livumele iqela ukuba libambe kude onke amandla eempendulo zabalandeli ababhiyozelayo kwaye libandakanye nabameli babo abazimiseleyo ekuphumeleleni.
Umkhwa wesi-3: Imithombo yeendaba yoLuntu yiNdawo eNtsha yokuKhulisa ixabiso leQabane
Ngokuvalwa kwehlabathi kweziganeko ezininzi ezikhoyo ngo-2020 kunye nokunyuka okukhankanywe ngasentla kwimpembelelo yedijithali kwimida, intlalontle ngoku ibalulekile ekubonakaliseni iqabane le-ROI nasekuncedeni ukugcwalisa izikhewu zengeniso. Ngapha koko, imithombo yeendaba zentlalo ibiphakathi kwezona ndlela zisetyenziswayo zentengiso sebenzisa inkxaso kule minyaka yangoku.
Amaqabane aya ngokufuna ubungqina obungaphezulu bokubuyela kutyalo-mali lwabo kunye nokubonakala ngakumbi ukuba ishishini labo lincedwa njani yimidiya yoluntu. Imibutho ifumana eli xabiso kwintengiso ngqo, ukuthengisa okutsha kukhokelela, ulwazi olwandisiweyo lwebrand kunye nokwazisa ngemveliso entsha.
Njengoko sele kuphawuliwe ngethuba lenjongo yeJenali yezeShishini lezeMidlalo, iMajor League baseball yenxalenye ezintlanu zokuqala, Kuqala ngoPete Alonso, eboniswe nguGatorade, idibanise uphawu lwesiselo sezemidlalo kubalandeli bebhola ye-baseball ngendlela ephilayo kwiligi Isiteshi se-YouTube.
Ixabiso lenkxaso mali linganwenwela nangakumbi ukuqhuba utshintsho olunentsingiselo kwezentlalo. Iqela leqakamba likaRajasthan Royals lisungule iphulo nge-NIINE napkins yococeko eIndiya, apho kukho ibala lokwenyani eliqhotyoshelwe kumaxesha. Ngexesha letonamenti ye-IPL yamva nje, NIINE kwezinye iilwimi Unike amantombazana alithoba unikezelo lweenyanga ezintathu lwee-napkins zococeko ngalo lonke ixesha lokufumana amanqaku, bebonke bebaleka i-186 kunye ne-1,674 yamantombazana.
Iposi ekwabelwana ngalo nguNiine (@niineindia)
Ukunyaniseka, ukuqinisekiswa okwenene, kunye nezinto ezibonakalayo ziya kuhlala zibetha iintengiso zeentengiso. Ukucela umxholo owenziwe ngabalandeli kuya kuvumela ii-brand ukuba zenze imikhankaso enamandla enqumleza ukunyusa intengiso. Baza kubonakala phakathi kwabakhuphiswano nesibheno esikhulu kumaqabane kwaye, ngokubuyayo, jonga ixabiso leendaba zentlalo kwingeniso.
tags: intengisoummeliI-contnet eyiyoukuthembekabarack obamabideni-covid-19umdaliiqela leqakambaikomiti yesizwe yedemokhrasidnciziphakamisoUmxholo owenziwe ngabalandelifansabalandeliI-GatoradeluhlazaNdiyayithanda ibhola ekhatywayoNdiza kuvotainstagramUkuphepha eLos AngelesI-baseball enkulu yeligiiindlela zentengisomlbninakuqala noPete alonsoIRajasthan yasebukhosiniiseyileI-napkins yococekoImidiya yokuncokolainkxasoIjenali yeshishini lezemidlaloTwitterumxholo owenziwe ngumsebenzisiyoutubeIsiteshi se-YouTube
UTom Kuhr sisigqeba sokulawula ngobuchule esinemvelaphi ebanzi kuthengiso lwedijithali, imisebenzi yengeniso, kunye nemidiya yoluntu. Uligqala lamaqela aphumeleleyo amaninzi kwaye uncedile ekunyuseni imali, ekwakheni amaqela akumgangatho wehlabathi, kwaye wenza ukuthengisa kunye neenkqubo zophuhliso lwamashishini ezenza ukuba zikhule ngokukhawuleza. Njengoko i-CMO ye- IGreenflyUsebenza ngokusondeleyo nezemidlalo, imithombo yeendaba, iimveliso zabathengi, kunye neefranchise ukuzenzekelayo kunye nokulinganisa iinkqubo zokuthengisa ezinamandla. Ukumela ilizwi lomthengi, iimveliso eziphumelele amabhaso zikaTom kunye namava akhethekileyo kubathengi akhokelele ekuphumeleleni okuninzi okuphumeleleyo nge-IPO kunye nokufunyanwa.
Ungalithenga njani igama ledomain